Imiyalelo "Imithi ye-Celebrex" yokusetshenziswa ebizwa ngokuthi yi- non-steroidal anti-inflammatory agent ebizwa ngokuthi yi-antipyretic ne-analgesic properties. Umphumela walesi sidakamizwa ukuvimbela ukuhlanganiswa kwe-prostaglandins ngenxa yokucindezelwa kwe-COX-2. Ngesikhathi esifanayo, amaphilisi e-"Celebrex", imfundo yokusetshenziswa kwawo iqinisekisa lokhu, ngokwezinga elincane kakhulu kunezinye izidakamizwa ezingezona ukuvuvukala okungezona isifo steroidal, okufaka isandla ekwakhiweni kwezilonda ezibizwa nge-gastroduodenal ulcers. Ngokuqondene ne-pharmacokinetics yalesi sidakamizwa, ukugxila okuphezulu kuphawulwe imizuzu eyikhulu namashumi amabili emva kokusetshenziswa, kanti isigamu sempilo cishe amahora ayisishiyagalolunye kuya kweshumi nambili.
Thatha izibhebhe ze "Celebrex" imiyalelo yokusetshenziswa okuphakanyiswayo ekwelashweni okuyinkimbinkimbi yezifo ezifana nesifo samathambo, i-spondylitis, i-algodismenorea ne-osteoarthritis. Ngaphezu kwalokho, le nqubo iphinde ibekwe ngenhloso yokubopha isifo sobuhlungu esibangelwa ukungenelela okuhlinzekwayo noma izifo. Ngokwe-annotation, ingasetshenziswa ukuphatha iziguli ezixilongwe nge-polyposis ene-familial adenomatous.
Ukuphikisana okuyinhloko kokuqokwa kwezidakamizwa eziphikisayo ezifana ne-Celebrex kukhona ukungaboni ngaso sonke isikhathi ku-celecoxib, ukusabela okubangelwa ukwelashwa kuya kuma-sulfonamide, nesimo ngemuva kokuhlinzwa okungahambi kahle kwe-aorto-coronary. Ngaphezu kwalokho, ungathathi le mithi kubantu abahlukunyezwa yi-asthma, isifo sofuba esiswini noma ukuhluleka kwenhliziyo.
Uma kwenzeka i-hypersensitivity kuya kwe-acetylsalicylic acid, ungaqala ukuthatha amaphilisi e- Celebrex. Ubufakazi bodokotela bufakazela nokungafaneleki kokusetshenziswa kwabo ngabantu abanesimo esibi kakhulu sokuqhwaba noma ukungaqiniseki kahle. Uhlu lwezingqinamba luhlanganisa iminyaka yobudala kuze kube yishumi nesishiyagalolunye, isikhathi sokubeletha, isikhathi sokukhwabanisa, ischemic, ukuphuma kwamathumbu, ukuphazamiseka kwamathumbu, ukuphazamiseka kwamathumbu, ukuphazamiseka kwamathumbu, ukuphazamiseka kwamathumbu, ukuphazamiseka kwamathumbu, ukuphazamiseka kwamathumbu, ukuphazamiseka kwamathumbu, ukuphazamiseka kwamathumbu, ukuphazamiseka kwamathumbu, ukuphazamiseka kwamathumbu, ukugula kwamathumbu, ukugula kwamathumbu, ukugula kwamathumbu, ukugula kwamathumbu, ukugula kwamasisu, isifo segazi kanye nesilonda sezilonda. Ngokuqapha okukhulu ukuthatha umyalelo wezidakamizwa othi "Ama-Tselebreks" wokusetshenziswa ukululekwa uma kwenzeka ukwephula ohlelweni lwe-cardiovascular, hyperlipidemia, i-dyslipidemia nesifo sikashukela. Abantu abanesifo se-cerebrovascular, izifo zomzimba, isilonda se-peptic kanye nesimo esithile sokuzikhukhumeza nokugcinwa kwamanzi kufanele futhi bayeke ukusebenzisa lesi sidakamizwa esivimba ukuvuvukala.
Uhlu lwempendulo engalungile engaba khona ehlotshaniswa nokwamukela amaphilisi e-"Celebrex" kuhlanganisa i-tinnitus, i-thrombocytopenia, ukuphazamiseka kwengqondo yomzimba, i-alopecia ne-hypertension ye-arterial. Ngaphezu kwalokho, ezinye iziguli zikhononda ngokukhathazeka okukhulu, ukukhwehlela, ukuthukuthela kwesitokisini, isicashu, i-dysphagia, isifo sohudo kanye ne-angioedema.
Umuthi 'Ingalipt'. Ukufundiswa kwezingane
Isidakamizwa "i-Nitroxoline" (izinkomba zokusetshenziswa)
Ukulungiselela imithi "Pimafukort". Imiyalo yokusetshenziswa
Ukusakazwa kwezinto kule uHlu Jikelele Lwamakheli
Indian unkulunkulukazi Durga
Ikhaya umusi okugeza - alternative uyakufanelekela ukuba beautician
Factor ukuhlaziya imali net
A Handbook for Beginners: Indlela yokudweba iziketi?
Indlela yokwenza ubuhlalu bokuqala kusuka kwendwangu ngezandla zakho
Indlela Engeza Webmoney Amakhadi